Duvet inovhara iyo iwe yauchazoda kuve nayo mumubhedha wako | Bezzia
Susana godoy | | Zvishongedzo zvekumba
Uri kutsvaga zvimwe duvet inovhara kushongedza mubhedha wako asi panguva imwechete iyo inokupa iyo kudziya kwaunoda zvakanyanya? Wobva wabheja pane mazano akadai. Nekuti vese Ikea naZara vane zvese zvaunoda kuva nazvo mumba mako, kusati kwasvika mazuva ekutanga echando.
Asi iwe zvakare unenge uchipa yako imba kubata kwekunaka uye nemhepo iyo iwe yauchazofarira kuwana. Nekuti iwo mazuva ekuzorora hauchazoda buda mumba. Pfungwa dzakanaka dzausingakwanise kupotsa. Uri kutomirira inotevera mienzaniso?
1 Iwo mabrashi mabhureki erudzi ayo asiri kushayikwa mumavharo e duvet
2 Organic anodhinda kavha
3 Kubata ingwe kwaisakwanisa kusiiwa kumashure
4 Chairo chaiyo duvet chifukidziro
5 Dhinda reSunflower kune ako mavhavha anovhara
Iwo mabrashi mabhureki erudzi ayo asiri kushayikwa mumavharo e duvet
Haisi iro rinogara richinyanya kurovera ruvara asi zvakanakisa kubheja pane akapfava kurohwa kweruvara. Nekudaro, imwe yemafungiro makuru ayo Ikea anayo ndeemhando yakaita seichi chevhavha. Model iyo inosangana mu mhando dzese dzekurara nekuti ichokwadi kuti pane zviyero zvinoverengeka zvaunazvo pamubhedha mumwe nemumwe. Neiyo chena kumashure uye mabrashruru ependi, iwe unenge uine chaiyo yakasarudzika mhedzisiro iwe yauchada. Uye zvakare, sekunyatso kuziva kwako, iri zvakare imwe yeaya mazano anogona kusanganiswa nezvose zvinogoneka zvekushongedza.
Organic anodhinda kavha
Ichokwadi kuti zvakare iIkea anoramba achibheja pane imwe yemafungiro makuru atinayo muhupenyu hwedu. Nekuti kunyangwe hazvo zvigadzirwa zvemanyowa zviri zvevamwe vanobatana zvikuru, tinoziva kuti vanogara vachiuya kubva paruoko rweIkea uye izvo zvinoita kuti tivade zvishoma, nekuti tinovawana nenzira yekutanga uye nemitengo inodhura zvakanyanya kupfuura isu funga. Zvinonzi maitiro akadaro anokwanisa kuendesa kudzikama pakati pezvinhu zvakaita sedonje uye viscose.. Asi imwe yeakanaka ruzivo nezvayo ndeyekuti inogona kukuchengetedza iwe mukugara uchipisa husiku hwese.
Kubata ingwe kwaisakwanisa kusiiwa kumashure
Kunyangwe iri imwe yeaya mapatani asingadiwe nemunhu wese, inofanirwa kucherechedzwa kuti ndeimwe yazvino uye haina kumbobuda muchitaera. Nekudaro mwaka kana gore hazvina basa, nekuti mbada inodhinda ichagara iinesu. Iyo nzira yakakwana yesimba kupfeka imba yedu nemhepo iya yemhara uye nezvimwe, kana tichitaura nezvekurara. Uye zvakare, isu tinobheja pane toni toni iyo inogara yakakosha mumwaka wega wega. Nekudaro, nekuziva zvese izvi, isu tatova munzira chaiyo uye mune ino kesi, ichave iri yaZara iyo inodawo kuti isu titambe pamhando. Haisi iyo pfungwa yakanaka here?
Chairo chaiyo duvet chifukidziro
Nekuti shiri nematavi zvinoumbawo imwe yemagadzirirwo atinozoda. Iyo yakakwana uye yakasangana musanganiswa iyo inoendesa kumashure kwatiri hove dzatinogara tichida mumakamuri edu ekurara. Iko kusanzwisisika kusanganisa kwekusviba uye girini inobata, Yakagadzirwa nekalikoni donje 200 tambo kuverenga. Ichakupa iwo ese masitayera anodikanwa nemusha wako uyezve, zvakare kubata kwekunaka uye kuravira kwakanaka. Nekudaro, iwe haugone kupotsa kubva pane yako yekutenga runyorwa futi.
Dhinda reSunflower kune ako mavhavha anovhara
Hatina kumira kutaura nezvezvinyorwa zvakadai. Yakazara neruvara runonaka ivo zvakare chikamu chemakamuri edu ekurara, saka mune ino kesi yanga isiri kuzove shoma. Zviri nezve anodhindisa sunflowers apo yero ndeimwe yezvakanyanya kukosha uye izvi zvinoita kuti imba yedu ive nechiedza icho chatinoda zvakanyanya. Kupfuura mwenje wakakwana uye ihwohwo kubata kwekukwirisa kwatisingakwanise kumira kutarisa kwazviri. Ndeapi eakafukidza duvet aunotendera kuti utakurwe nawo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zvishongedzo zvekumba » Iyo duvet inovhara iwe yaunoda pamubhedha wako
Zara inounza yayo nyowani Studio Unganidzo, zviwane!